China Akpaaka Mgbanwe Endoscope Washer Disinfector Manufacturer na Supplier | Shinva
Akpaka na-agbanwe agbanwe Endoscope Washer Disinfector
Akpanaka Mgbanwe Endoscope Washer-disinfector ezubere site na ọkọlọtọ ISO15883-4 nke pụrụ iche maka ịsacha na disinfection maka Flexible Endoscope.
Akwa arụmọrụ saa
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè na-agbazi endoscope nwere ike mechaa usoro ịsacha na disinfection niile maka otu mpempe akwụkwọ na-agbanwe agbanwe n'ime nkeji iri na ise, na-eme ka arụmọrụ nke endoscopes gbanwee nke ukwuu.
Endoscope nchedo imewe
Function Ọrụ nyocha nyocha
A ga-agwụcha ule nyocha Endoscope tupu ị kpọtụrụ mmiri mmiri n'ime ụlọ ahụ, ọ nwere ike ịme nyocha na-aga n'ihu n'oge okirikiri. Mgbe ọnụọgụ ego achọpụtara gafere uru a na-ekwe ka enyere ya, sistemụ a ga-ewepụta ihe mgbama ọhụụ na nke a na-anụ anya, ma mechie okirikiri
Usoro nsuso usoro
■ Usoro mbipụta data
Onye nbipute nwere ike ibipụta data ịsacha na disinfection maka endoscope nke ọ bụla, na-eme ka ọ dịrị ndị ọrụ mfe idebe ndekọ.
■ Nhazi usoro njikwa data.
Usoro a nwere ike ịnakọta ozi nke ndị ọrụ endoscope na usoro ịsacha na disinfection data nwere ike ijikọ sistemụ njikwa kọmputa nke onye ọrụ site na netwọkụ, nke dị mfe ịnweta njikwa mmekọrịta maka ozi gbasara ọrịa na ozi endoscope na ozi disinfection.
Ọrụ disinfection nke onwe
Mgbe ịchisịrị mmezi ahụ, rụzie ma ọ bụ kwụsịtụ igwe ahụ, kwesịrị ịme mmemme disinfecting onwe ya.
A-function Ọrụ disinfection onwe onye nwere ike ikpochapu igwe na ọkpọkọ nke ọma, gụnyere nhicha 0.1um, iji gbochie onye na-ehichapụ disinfector ịghọ isi iyi nke mmetọ.
100% Washingsa na disinfection
■ All-gburugburu, zuru anwụrụ ịsa na disinfection
Chamberlọ ịsa ahụ nke nwere ihe ịgba agba na ogwe aka na-agba agba nke nwere ike ime ka ịsacha na disinfection maka elu nke endoscope, ebe mmiri na-ekesa nwere ike ime ka ịsacha na disinfection na-aga n'ihu maka oghere nke endoscope.
■ Endoscope lumen mgbali booster mgbapụta
Site na endoscope lumen booster pump, nwere ike ime ka ịsacha na disinfection, gas ma ọ bụ ọgwụ mmiri ma mee biopsy ma ọ bụ mmiri lumen, iji gbochie nhazi nke biofilm nje.
Water Mmiri a kpochara na-ebili
Mgbe disinfection, ọ ga-ekpocha endoscope na mmiri nke nzacha 0.1um iji zere nsogbu nke abụọ site na mmiri na-adịghị ọcha.
Ry Ihicha ọrụ
Ọrụ ihicha nwere ike ịchọpụta ihicha maka lumen nke endoscope na ụdị abụọ, ihicha ikuku na ihicha mmanya.
Nchedo zuru oke maka onye ọrụ
Door Ọnụ ụzọ akpaaka, mgba ọkụ ụkwụ ụkwụ
Jiri anya gị hụ ụzọ ọnụ ụzọ na-akpaghị aka, ọ dị mfe ileba anya na nsacha na ọnọdụ disinfection; mgbatị ụkwụ ụkwụ, enwere ike imeghe ụzọ site n'iji nwayọ na-agba ụkwụ ụkwụ.
Losed Banyere ya
Ejiri usoro ihe eji eme ihe na-ekpochapu ihe nke ihe eji eme ihe. ọnụ ụzọ iko iko ga-eme ka ọnụ ụzọ ahụ mechie gasket, iji gbochie isi nke disinfectant na nchebe nke kachasị ahụike.
■ Chemical nwekwara akpaka kwukwara
N'ime usoro ịsa ahụ na disinfection, a ga-atụnye ihe mgbakwunye kemịkalụ, dị ka enzymes, mmanya na disinfectants ma tinye ya na akpaghị aka.
■ Disinfectant akpaka nlele ọrụ
Usoro onye na-agba ịnyịnya B nke ejiri ngwa ọrụ disinfectant akpaka na-adaba adaba maka ndị ọrụ iji nyochaa ịta ahụhụ nke disinfectant yana iji kpuchido nchekwa nke onye ọrụ ahụ.
Function Disinfectant akpaka mgbakwunye na-agbapụta n'ahụ ọrụ
Usoro Rider B na-akwadebe ya na disinfectant akpaka mgbakwunye na ịrụ ọrụ. Mgbe ị na-agbakwunye disinfectant, dị nnọọ wunye disinfectant n'ime saa ụlọ na-amalite na disinfectant na-agbakwunye mmemme. Mgbe ihapu, na-amalite na disinfectant ihapu mmemme.
Nke gara aga: XH507 Ime Otu
Osote: Akpaka Door raygba Washer
Angdị ụlọ nchekwa nchekwa ụdị
Efere ụdị nchekwa kabinet